Cudurka Daacuunka, waxa ha’yadda Qaramada Midoobey u qaabbilsan caafimaadka adduunka ee World Health Organisation (WHO) ku sifaysay inuu yahay astaamaha ama calaamadaha ugu muhiimsan ee tilmaama horumar la’aanta bulshada. Waayo-aragnimadii laga dhaxlay la dagaallanka Daacuunka ayaa fure iyo gundhig u noqotay fahamka guud ee cudurada faafa iyo hanaqaadka sayniska caafimaadka casriga ah ee dunidu ku tallaabsatay wixii ka dambeeyey dabayaaqadii qarnigii 19aad. Cudurka Daacuunku laga soo bilaabo 1994kii, wuxu noqday joogto (endemic) geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalida. Sida aan ka wada warqabnona wuxu ugu sii daran yahay sannadkan 2017ka oo uu ka dillaacay meelo dhawr ah, dad badanina ugu geeriyoodeen. Waxa ka mid ah goobahaas lagu arkay cudurka Daacuunka sannadkan bilowgiisii iyo badhtamihiisa Koonfurta Soomaaliya, Bariga dalka Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Somaliland.
Haddaba, si aan wax uga ogaanno waxyaabahaas iyo qaar kale oo ku saabsan sifooyinka iyo marxaladaha kala duwan ee cudurka Daacuunka, waxa qoraalkan soo socda soo diyaariyey Saxadoon.com. Kaas oo ay bulshada Soomaalidu ka heli doonaan aqoon, macluumaad, xogo dheeraad ah iyo faa’iidooyin badan oo ku saabsan dhinaca daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka guud (Public health). Warbixintan oo aad u dheer, waxay si guud iyo si gaarba uga eegaysaa cudurka Daacuunka dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin siyaabaha looga hortagi karo. Waxay jawaab u raadinaysaa su’aasha ah, waa maxay sirta aan dawada iyo tallaalka ahayn ee dunida u suurtogelisay inay ka hortagaan oo xakameeyaan cudurka Daacuunka?
Fahamka guud ee cudurka Daacuunka, waxay innoo horseedaysaa garashada mawduucyo badan oo muhiim ah sida: caafimaadka iyo xanuunka, cudurada la kala qaado, caafimaadka guud, cilmiga shaybaadhada caafimaadka, barashada xanuunka iyo nidaamyada daryeelka caafimaadka. Soo bandhigista iyo faafinta mawduucyadan iyo qaar kaleba waxay ka mid yihiin himilooyinka iyo yoolka guud ee Saxadoon.com.
Qoraalkan oo u yara badan academic, wuxu waxtar aqooneed iyo mid daraasadeedba u yeelan doonaa inay ka faa’iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida gaar ahaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, ardada, aqoonyahanka, cilmibaadhayaasha, maamulka hay’adaha dawladda, ururada samafalka, jaamacadaha, saxaafadda iyo dejiyeyaasha siyaasadda dalka (Policy makers). Guud ahaan dadweynaha iyo bulshada inteeda kale, wuxu u noqon doonaa wacyigelin, baraarug iyo wargelin guud.
Qoraalkani, isaga oo intan ka kooban ayuu hore u baxay oo warbaahinta galay. Halista iyo dhibaatada soo noq-noqota ee cudurka Daacuunka iyo baahida loo qabo in si qotodheer loo fahmo cudurkan awgeed ayaa kalliftay inaan qoraalkii hore wax ka bedel iyo isku habayn ku samaynay isla markaana ku soo kordhinno xogo badan iyo faah-faahin dheeraad ah. Waxaan filaynaa in dhammaan akhristayaashu ay wax badan ka korodhsan doonaan warbixinta.
Cudurka Daacuunka oo adduunka intiisa badan ka yaraaday, dalalka qaarkoodna laga cidhibtiray muddo hore ayaan weli qaaradda Afrika ka dhammaan oo dad badani ugu dhintaan sannad walba. Waddamada geeska Afrika ayaa ka mid ah meelaha cudurka Daacuunku uu inta badan ka dillaaco gaar ahaan waqtiyada abaaraha iyo xilliyada ay roobabku da’aan.
Cudurka Daacuunku, waa cudur ka mid ah cudurada faafa (infectious diseases) ee la is qaadsiiyo ama la kala qaado waxaana sababa oo keenta bakteeriyada lagu magacaabo, Vibrio cholerae. Daacuunku, wuxuu ku dhacaa oo saameeyaa xiidmaha yar ama mindhicirka yar taas oo keenta inuu sababo shuban aad u fara badan oo horseeda fuuqbax (dehydration). Sidaa awgeed, waxa dhimashada keenaa ama sababaa waa shubanka badan ee qofka la xanuunsanaya cudurka Daacuunka ay biyihii jidhkiisa ku jiray ka dhammaadaan.
Daacuunku, waa cudur marka uu meel ka dillaaco dadka ku abuuri kara argagax, cabsi iyo kala yaac. Wuxu caan ku yahay oo lagu yaqaan in dadku ugu dhintaan si deg deg ah oo naxdin badan saacado gudahood haddaan laga soo gaadhin oo laga daaweyn. Waxa uu mas’uul ka ahaa oo gallaaftay nolosha malaayiin dad ah, khasaare dhaqaale oo baxaad weyn leh, khalkhal iyo carqalad nololeed oo aad u adag oo uu u geystay qaybaha kala duwan ee bulshada ku noolaa meelo badan oo ka mid ah dunida sida aan ku arki doonno taariikhda cudurka Daacuunka (History of cholera infection).
Halista cudurka Daacuunka
11th July 2017 By Saxadoon
Jaantuskani wuxu muujinayaa meelaha dhaawacma ee bukooda ka dibna caabuqa.
Sidaan hore ugu soo aragnay qoraalkii ku saabsanaa farqiga u dhexeeya xanuun iyo cudur (disease and infection), waxa jira erayo ama magacyo badan oo kale isla markaana dadka badankiisu isku khaldaan oo aysan farqi badan u samayn markay adeegsanayaan. Taas oo ka bilaabanta khalad qof sameeyey markii hore dabadeedna intuu bulshada ku faafay hirgalay noqdayna khalad wadareed.
Labada eray (magac) ee cudur iyo caabuq ma aha kuwo midba kan kale halkiisa ama booskiisa buuxin karo, sababtoo ah mid waliba macne kan kale ka duwan ayuu leeyahay. Waa laba eray ama magac oo aad iyo aad u kala duwan shaqona aan isku lahayn isla markaana leh macnayaal kala jaad ah oo tilmaama xaalado kala duwan.
Cudur (infection), waa sidaan hore u soo sheegnay dibna ugu noqon mayno waana magaca loo yaqaan xanuunada ay jeermisku sababaan ee ku dhaca dadka iyo xayawaanka. Marka cudur la tilmaamayo ama laga hadlayo waxa shardi ah laba ammuurood inay jiraan ama dhacaan:
Marka 1aad waa in cudurkaasi yahay cudur kii ugu horreeyey ee ku dhaca ama hela qofka xanuunsanaya ama meesha bugta ee cudurku ku dhacay (primary infection).
Marka 2aad waa in cudur keenuhu yahay jeermiska cudur dhaliyaha ah (pathogen organism) ama jeermisyada kale ee fursadda ka faa’iidaysta/ka faa’iidaystayaasha (opportunistic organisms). Tusaale, ahaan waxa ka mid ah cudurada aasaasiga ah (Primary infections) Qaaxada (TB), Jadeecada (Measles), Daacuunka (Cholera) iyo cudurada kale ee caadi ahaan ku dhaca aadanaha iyo noolayaasha kale sida xayawaanka.
Labadaas xaaladood waxay inna tusayaan in bilowga hore ee xanuunka inuu yahay cudurka waxa keenay xanuunka isla markaana waxa keenay cudurka inuu yahay jeermiska cudur dhaliyaha ah (microbial pathogens).
Waxa kale oo jirta marxalad kale, in cudurku aadanaha ugu dhici karo ka dib xaalad ay sabab u tahay dhibaato (sida dhaawac), xanuun iyo cudur kale oo qofka hore ugu dhacay intaanu cudurku ku dhicin (Secondary infection).
Xaaladdan labaad (secondary infection), waxay ku dhacdaa bukaan markiisii horeba la xanuunsanay xanuun ama dhaawac soo gaadhay ka dibna uu cudur ku dhaco qofka inta weli lagu guda jiro daaweynta xanuunkii hore ee bilowga ahaa. Tusaale ahaan, waxa ka mid ah gubashada, jabniinka, qalliinka ka dib, dadka inta badan cusbitaalka ugu jira ama ku raaga xanuun culus oo helay dartii iyo bukaan laga daawenayey cudur oo cudur kale ku dhaco sida qof Qaaxo qabey oo haddana cudur shuban lehi helay ama ku dhacay. Cudurada noocaas ah ee ku dhaca bukaan hore ula jirranaa xanuun ama cudur kale waxay sababaan waxyeello labaad oo qofkii xanuunsanayey soo gaadha.
Haddaan intaas ku dhaafno cudur oo aan isweydiinno, waa maxay caabuq? Muxuu cudurka kaga duwan yahay? Maxay iskaga mid yihiin, maxayse ku kala duwan yihiin?
Caabuq, waa magaca loo yaqaan marka meel jidhka ka mid ah oo dhaawac ama nabar soo gaadhay dartii ay bukooto oo muddo yar ka dib nabarkii ku yiil hoosta ka humbuluuluqo isla markaana malaxaysto oo hurgumo gasho. Haddaan si fudud u sheegno, caabuq waa meel nabar ama waxyeello soo gaadhay oo bukootay ka dibna hurgumo yeelatay (wound).
Caabuq waxa kale oo la odhan karaa, waa meel malaxi gashay taas oo ah qollad/qoldhad jidhka ka mid ah ama meel dhaawacantay oo ay malaxi ku jirto taas oo ay sababtay ama keeneen jeermis, dhawac ama xanuun (abscess).
Hurgumadu, waa magaca guud ee kulmiya dheecaannada iyo waxyaabaha badan ee ka soo dareera ama ku jira meesha bugta ama hore u bugtay (dhaawacantay, nabarowday ama bukootay) ee hoosta ka caallirtay ama ka malaxaysatay ee milishay. Malaxduna (pus) waa dheecaan midab cad ama cawl leh oo nabarada hurgumada lehi ay yeeshaan kana kooban mararka qaarkood dhiig iyo dareerayaal kale sida ka muuqato sawirkan hoose.
Sidaas darteed, caabuq guud ahaan wuxu noqonayaa meel dhaawac ama nabar soo gaadhay oo bukootay ama milishay iyo meel malaxaysatay ama ay ku jirto (wound/abscess).
Nabarrada waxa keeni kara dhaawac, gubasho, jug, mindi, xabbad/toogasho, daqar, shil, qaniinyo iwm. Waxayna noqon karaan qaar furan oo afka ama dusha ka furan oo muuqda oo ay malax iyo dheecaammo ka socdaan ama ku jiraan (open wound). Iyo qaar xidhan ama daboolan oo hoosta ka bukooda dabadeedna soo buurma ama barara oo ay hurgumo (milil iyo malax) ka buuxdo (closed wound).
Caabuqa furan (open wound), waa ka inta badan muuqda waxaana keena dhaawac (injury) soo gaadhay ka dibna meeshu/nabarku bukoodo oo malaxaysto. Caabuq baa jira isna meeshu soo yara buurato oo hoosta ka bukooto oo marka dambe dillaaca oo malaxi ka soo baxdo. Waana nooca sida badan loo yaqaan dhullaaxa kaas oo ah ka soo bax yar oo hoosta malaxi kaga jirto.
Caabuqa nabarka furan iyo ka dhullaaxa, waa labada nooc ee inta badan Soomaalidu caabuqa u taqaan waayo waa muuqdaan oo isha ayaa lagu arki karaa. Waana caabuqa furan ee ku dhaca maqaarka sare iyo jidhka oogadiisa.
Caabuqa xidhan (closed wound), waa ka aan muuqan oo inta badan ku dhaca jidhka hoostiisa. Waa caabuqa daboolan ee aan muuqan waayo meelaha jidhka gudihiisa ayuu saameeyaa waxaana afka qalaad loo yaqaan Abscess (qollad xidhan oo malax iyo dheecaan ku ururay ku jiraan). Taas oo ah meel bararsan oo nudaha/xubnaha jidhka gudahooda ah halkaas oo ay ku jiraan malax ururtay/malaxi ku urursan tahay.
Marka ay dillaacaan waxa ka soo baxa dheecaammo ama hurgumo. Taas oo ah hurgumo ama malax ku ururta nudaha/xubnaha jidhka gudahooda kuwaas oo noqon kara oogada sare/maqaarka sare ee jidhka (skin abscess) iyo gudaha hoose ee jidhka waxaana ka mid aha xubnahaas maskaxda (Brain abscess), beerka (Liver abscess), saabka caloosha (Abdominal abscess) iwm.
Caabuqa noocan ah (abscess) ee ku dhaca nudaha iyo xubnaha jidhka dhexdooda waxa uu inta badan ka bilaabmaa dhiig meel ku urursamay oo ka dhashay cadaadiska ku soo noqnoqda iyo cabudhka xididdada dhiigga. Waxayna saamayn karaan xubin kasta oo jidhka ka mid ah.
Waxa keena caabuqa daboolan sida badan laba sababood oo kala ah: bararka ka dhasha inflammation processka iyo iska caabbinta ka timaadda difaaca jidhka. Sababta labaadna waa bakteeriyada malaxda samaysa (pyogenic bacteria) hadday jidhka ama meesha bugta fursad ay u hesho inay soo gasho.
Dadka Soomaalidu markay ka hadlayaan caabuqa, waxay ku tilmaamaan sifooyinkan sida meel malaxi gashay, milil leh, hurgumo gashay/ka socoto, hunbuluuluqday iyo dhullaax ama ka soo bax yar oo malaxi gashay. Waxyaabahaas oo dhammi waa isu wada dhow yihiin waxayna sheegayaan inuu caabuqu yahay nabar furan (open wound) ama nabar xidhan (closed wound), boog/qoon ama nabar jidhka soo gaadhay oo caalir leh oo jidhka muddo ku yaallay oo aan weli begsoon/begsan.
Taas oo markaa muujinaysa in waxa caabuqa looga jeedaa yahay meesha jidhka ka mid ka ah ee dhaawacantay ama laga soo baxay sida nabarrada, gubashada, qoomaha, boogaha iyo meelaha kale ee waxyeelladu soo gaadhay ee dheecaamaystay isla markaana shuuqaya ee wax ka da’ayaan oo laga yaabo inay mararka qaarkood ur yare leeyihiin. Meelahani inta badan waxay u badan yihiin jidhka oogadiisa waana muuqdaan iyagoo qaabab kala duwan leh oo dheecaan iyo malaxi ka da’ayso oo bararsan mararka qaarkoodna afka kala haya oo hareeraha ka soo qolofaysanaaya soona begsanaya.
Caabuqu marka laga eego xagga caafimaadka (medical practice) noocyo badan, qaabab iyo magacyo kala duwan buu leeyahay taas oo ku xidhan muuqaalkiisa, intuu le’eg yahay, meesha uu ku dhacay, waxa sababay iyo nooca dhaawaca. Laakiin, halkan waxaynu uga hadlaynaa oo keliya si guud oo kooban iyo inaan fahamno oo ogaanno in caabuq iyo cudur ay kala jaad yihiin.
Erayo badan baa loo isticmaalaa marka caabuqa la sharraxaayo ama la daaweynaayo hadday qalliin tahay, dhaymo iyo dabiibidba. Magacyada, dheecamada iyo noocyada ay micnaha isku dhow leeyihiin (synonym) ama isku macne dhow yihiin waxa ka mid ah erayadan soo socda ee ku qoran afka Englishka:
Pus, exudate, transudate, serous fluid, wound, discharge, secretion, suppuration, purulent, abscess, ulcer, ulceration, cyst, boil, blister, sore, pustule, carbuncle, pimple, spot, papule, wen, whitlow, vesication, furuncle, canker; injury, lesion, cut, gash, laceration, tear, puncture, slash; sore, graze, scratch, scrape, abrasion; bruise, contusion; trauma, traumatism, inflammation iyo qaar kale oo badan.
Waxyaabaha sababa caabuqa
Marka la soo koobo, waxyaabo badan oo kala duwan baa sababa ama keena caabuqa. Sababahaas waxa ka mid ah:
Dhaawaca– dhaawacyadu siyaabo kala duwan bay u keeni karaan caabuqa. Tusaale ahaan waxay noqon karaan: jabniin, shil, toogasho/xabbad, nabar kugu dhacay, daqar, mindi, kufid, qaniinyo, gaadhi dhacay iyo wax kasta oo qofka dhaawac gaadhsiin kara. In kastoo nabarradu si dabiica ah isaga begsadaan haddana waxa dhacda inay mararka qaarkood bukoodaan oo caabuqaan.
Gubashada-nabar ka yimaadda meel ama qof gubtay. Waxa dhacda in mararka qaarkood haddaan si fiican loo daaweyn inay caabuqaan.
Qalliin-qalliin lagu sameeyey qofka ama meel jidhka ka mid ah. Haddaan qalliinka ka hor iyo ka dib aan qofka la siin nooladilayaasha (antibiotics) ama aan si habboon loo daryeelin nabarka. Waxa dhacda in meesha la qalay iyo jidhka oogada ah ee la jeexay inay bukoodaan oo caabuqaan.
Soo bax-fin ama meel laga soo baxay oo nabarowday ama barartay. Haddaanay meeshu iskeed u ladnaan waxa dhici karta inay caabuq noqoto.
Barar (inflammation)-nabarrow ama xanuun jidhka ku abuurma (inflammatory process) iyo jawaab celinta ka timaadda isdifaaca jidka. Wallow ay inta badan wax dhibaato weyn ah keenin ama la daaweyn karo waxa laga yaabaa inay caabuq sababaan oo malaxi gasho.
Xaaladahan aan kor ku soo sheegnay waxa suurtagal ah inay fursad siiyaan jeermisyada ku nool caadi ahaan jidhka oogadiisa iyo gudahiisa (normal flora bacteria). Taasina ay keento in jeermisku meesha bugta ee caabuqday gudaha u soo galo oo halkaas cudur ka abuurmo ama ka dhasho. Taas oo markaa noqonaysa Secondary infection sidaan hore u soo sheegnay. Waana marka uu cudurku yahay mid meel yar ama qayb kooban oo jidhka ah ku dhacay meeshaas oo markeedi horeba bugtay ama waxyeello soo gaadhay sida dhaawac ama gubasho oo kale.
Arrintaasi waxay dhici kartaa marka meesha caabuqday ay muddo sidaas ahaato ama ay bilaabanto marka ugu horraysa ee dhaawacu meesha gaadho haddaan si fiican loo nadiifin ama la daaweyn oo la dhayin. Cudurkaasi wuxu sababayaa marxalad labaad oo xaaladdii meesha caabuqday ay sii bukoonayso oo keenayso in loo baahdo in lagu daaweeyo cudurka nooledilayaasha. Mararka qaar koodna meesha ayaa si dabiici ah isaga ladnaata oo jeermiska soo galay waxa waxyeelladiisa yareeya ama is hortaaga awoodda difaaca jidhka (body defence mechanism or immunity).
Cudur-waxa jirta xaalad kale, oo cudurku ka mid yahay waxyaabaha caabuqa keena ama sababa si bilow ah (primary infection). Caabuqaasi waa marka ay jidhka ama meel ka mid ah jidhka oogadiisa ama gudahiisa ay soo galaan jeermisyada cudurka dhaliya (pathogens). Waxa ka mid ah jeermiska noocaas ah bakteeriyada malaxda samaysa ee sababta in meeshu ama jidhku bukooto oo malaxi gasho (suppurative/purulent) isla markaana caabuqdo (a pyogenic bacterium or a pus-forming bacterium).
Xaaladdani waxay inta badan ku dhacdaa nabarrada/qoomaha/boogaha iyo meelaha kale ee waxyeelladu soo gaadho iyo meelo jidhka ka mid ah oo aan waxba soo gaadhin. Jeermisyada malaxda abuura waxay u badan yihiin bakteeriyada nooca loo yaqaan Gram-positive organismska oo ay ka mid yihiin Staphylococcus aureus, Streptococcus species iyo bacteeriyada aan ku noolaan karin hawada oxygiinta (anaerobic bacteria) sida uu muujinaayo sawirkan hoose.
Sidaan hore u soo sheegnay, xanuunada ay keenaan jeermisku waxa loo yaqaan cudur, sidaa darteedna cudurka waxa keena oo sababa waa jeermiska. Cudurku wuxu yimaaddaa marka jeermisyada cudur dhaliyayaasha ahi (pathogens) ay jidhka soo galaan dabadeedna ku koraan kuna tarmaan si ay u sababaan cudurka (infections).
Cudurku, wuxu noqon karaa mid meel jidhka ka mid ah ku dhaca (local infection) ama mid jidhka oo dhan guud ahaan saamayn ku yeesha oo qofku u xanuunsado (systemic infection) sida Qaaxada, Daacuunka, AIDSka iwm. Cudurku, waa mid bilow ah oo ugu horrayn ku dhaca qof caafimaad qabay (primary infection) iyo mid ku dhaca qof aan markiisii horeba caafimaad qabin oo la xanuunsanayey xanuun, cudur ama dhaawac hore oo bukaanka u keena waxyeello iyo caafimaaddarro labaad (secondary infection).
Caabuq, waa magaca guud ee loo yaqaan marka meel gaar ah oo jidhka aadanaha ama xayawaanka ka mid ah oo u badan oogada jidhka ama meelaha kale ee jidhka sida xubnaha dhexdooda dhaawac ama waxyeello soo gaadho meeshuna ay yeelato dheecaan, milil iyo malax is biirsatay oo noqda hurgumo. Taas ah oo in meeshii dhaawacantay ay bukooto oo nabarkii ku yiil hoosta ka hunbuluuluqay ama ka malaxaystay oo hurgumo gasho ama yeelatay.
Hurgumadu waa astaanta ama calaamadda lagu garto caabuqa ee maaha cudur ku dhacay meel ama qof (it is a sign or sysmptom of abscess or infected wound). Hurgumo waxay noqonaysaa magaca guud ee kulmiya dheecaamada ka soo baxa ama ka soo dareera meel hore oo u bugtay oo dhaawac soo gaadhay oo hoosta ka malaxaysatay ama ka caallirtay.
Caabuqu, marka uu ku dhaco jidhka oogadiisa waxa sababa dhaawac (injury) meesha soo gaadhay. Caabuqa ku dhaca jidhka gudihiisa waxa keena inta badan habka falceliska difaaca jidka (inflammatory process), inkastoo ay dhici karto in waqtiyada qaarkood inay sababaan jeermisku siiba bakteeriyada. Waxa laga yaabaa in caabuqa ku dhaca xubin dhexdeed sida beerka (Liver abscess) uu oo ka bilaabmo dhiig ku urursamay oo uu keenay cadaadiska ku soo noqnoqda iyo cabudhka xididdada dhiigga qaada dartood.
Sidaa awgeed, waxyaabaha sababa ama keena caabuqa waa badan yihiin waana kala duwan yihiin (multifactorial causes). Cudurkuna waa mid ka mid ah laakiin wuxu u badan yahay mid ka dhasha waxyeello iyo dhaawac hore u soo gaadhay meesha ama qofka (secondary infection).
Labadaas magac ee cudur iyo caabuq sidaas bay u kala duwan yihiin. Marka, ereyadaas si aan sax ahayn loo adeegsado, lagu isticmaalo meelo badan oo khalad ah ama aanay ku habboonayn waxay horseedi kartaa marin habaabin iyo ismaandhaaf.
Qofkii raba inuu indhihiisa ku arko si uu u fahmo, ha gesho Google ereyga infection ama wound ama injury ama abscess ha doorto images ka dibna ha riixo si uu uga bogto muuqaallada iyo xaaladaha kala duwan ee uu arki doono. Haddaad qalbi jilicsan tahay ama aad ka naxdid dhaawacyada buka ha eegin ee iska dhaaf.
Siyaabaha khaldan ee loo isticmaalo magaca caabuq waxa ka mid ah in meeshii lagu arko erayga infection (cudur) iyo marka laga hadlayo xanuunnada ay jeermisku sababaan (cudurada) lagu sheego caabuq. Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay caabuqa Ebola oo ka dillaacay meel hebla (iyadoo loo jeedo cudurka Ebola/Ebola infection), caabuqa Daacuunka (cudurka Daacuunka/cholera infection) iyo qaar kale oo sidaas oo kale ah. Haddaad eegtid qaamuusyada afka Soomaaliga iyo Englishka lagu qoray, waxad inta badan ku dhex arkaysaa tarjumaad cudur ku sheegaysa caabuq. Sidoo kale, macluumaadka daryeelka caafimaadka (healthcare information) ee loogu talo galay Soomaalida ku nool waddamada debedda waxa ku qoran caabuq iyo infekshan (infection oo la Soomaaliyeeyey).
Runtii, inay sidaasi dhacdo la yaab ma leh waayo sidii dawladdii Soomaalidu u burburtay waxa istaagay oo dib u dhac ku yimid horumarinta cilmiga sayniska caafimaadka iyo koritaanka Afka Soomaaliga. Taasina, waxay sababtay in lagu jaahwareero adeegsiga afafka qalaad iyo Af Soomaliga gurran ama gurracan ee aan is lahayn. Sidaa awgeed, waxa wanaagsan in la iska hubiyo isticmaalka magacyada aan saxda ahayn ee horseedi kara inay gudbiyaan farriin khaldan iyo waxan loo jeedin. Waxa tubta toosan ah, in la baadho oo la fahmo erayada noocyadaas oo kale ah si loo gaadho ujeeddadii iyo hadafkii la rabay.
Filed Under: Blog, Infectious Diseases
26th May 2017 By Saxadoon
Tusaale muujinaya isticmaalka tilmaamayaasha meeqaamka caafimaadka iyo dadka
Marka la qiimaynayo qof caafimaadkiis way fududahay laakiin marka la qiyaasayo oo la qiimaynayo caafimaadka guud ee bulshada way adag tahay. Halbeegyada lagu cabbiro ama lagu qiyaaso caafimaadka guud way ka duwan yihiin kan caafimaadka gaar ahaaneed lagu qiimeeyo. Cabirka ama qiyaasta caafimaadka guud si loo qiimeeyo togannaantiisa iyo tabannaantiisa waxa la isticmaalaa iyada oo la adeegsanaayo tilmaamayaasha caafimaadka (Health Indicators).
Tilmaamayaasha caafimaadku waa sifooyinka la cabbiri karo ama la tirin karo ee ka tarjumaya dadweynaha caafimaadkiisa kuwaas oo la isticmaalo marka la qiimaynaayo oo la qiyaasayo caafimaadka guud ee bulshada. Xogta iyo macluumaadka laga helo qiimaayntaas ayaa caddayn iyo muujin u noqda sida togan ama taban ee uu u shaqeeyo daryeelka iyo adeegga caafimaadka ee waddankaasi.
Xogta iyo macluumaadka lagu cabirro tilmaamayaasha caafimaadka waxa laga soo ururiyay oo laga soosaaraa warbixinaha sida joogtada ah uga soo baxa goobaha, xarumaha, waaxyaha caafimaadka waddanka iyo laamaha kale ee dawladda sida Wasaaradda arrimaha gudaha.
Warbixinahaasi waxay bixiyaan oo sheegaan macluumaad iyo tibaaxo khuseeya xaaladda guud ee caafimaadka kuwaas oo lagu hawl geli karo. Waxaa ka mid ah macluumaadkaas: sida uu yahay caafimaadka dadweynuhu, waxqabadka nidaamka caafimaadka iyo sifooyinkiisa. Tilmaamayaashaasi waxay muujiyaan macluumaad isbarbardhiga sida isbeddellada xaaladaha caafimaadka, meelaha ay wax u kordheer ama ka dhaceen, saamaaynta qaybaha bulshada, meelaha muhiimka ah ee u baahan in diiradda la saaro iyo sidoo kale horumarka iyo waxqabadka hannaanka caafimaadka intii muddo ah ee la dhaqan geliyey qorshaha caafimaadka waddanka.
Ujeeddada iyo himilada laga leeyahay adeegsiga tilmaamayaasha caafimaadku waa maan ku ahaynta iyo sidii loo hagaajin lahaa adeegga caafimaadka si bulshadu u hesho daryeel caafimaad oo tayo wanaagsan.
Qiyaasaha iyo tirooyinka ka soo baxa xog ururinta ay baadhayaasha caafimaadku (kooxaha xogaha iyo daraasadaha sameeyey) soo bandhigeen ayaa lagu go’aan qaataa sidii loo dabooli lahaa wixii baahi iyo dhibaato caafimaad ee dalka ka jirta. Tilmaamayaasha caafimaadka ayaa dawladuhu u isticmaalaan sidii ay u hagi lahaayeen siyaasadda daryeelka caafimaadka iyo jaangoynta qorshaha horumarinta waddanka.
Sidaas awgeed, tilmaamayaasha caafimaadka waxa lagu cabbiraa awoodda waddanku u leeyahay siinta iyo bixinta baahiyaha aasaasiga ah muwaadiniintiisa ee dhinaca caafimaadka taas oo muhiim u ah daryeelka caafimaadka bulshada. Waana halka laga qiyaaso waddan horumarkiisa iyo dib u dhaciisa siiba xagga dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo daryeelka guud ee arrimaha bulshada.
Tilmaamayaasha caafimaadka asaasiga ah ee WHO u soo jeedisay dalalka adduunka inay adeegsadaan waxa lagu qiyaasaa ilaa boqol (100) tilmaame caafimaad oo ka farcama afar (4) tiir oo tilmaamayaasha caafimaadka ah. Tiirarka waaweyn ee tilmaamayaasha caafimaadku waxay kala yihin sidan hoos ku qoran.
Meeqaamka caafimaadka (Health status)
Sababaha halista (Risk factors)
Daboolista adeegyada caafimaadka (Service coverage)
Nidaamyada caafimaadka (Health systems)
Tilmaamayaashaas caafimaadka oo aad u badan darteed waxan halkan ku soo qaadanaynaa tusaaleyaal kooban isla markaana qormooyinka dambe ayaan ku eegi doonnaa guud ahaan caafimaadka geeska Africa iyo tilmaamayaasha caafimaadka haddii ilaahay ka dhigo. Sidaan horeba, u soo sheegnay marka la qiimaynaayo daryeelka caafimaadka bulshada waxa la adeegsadaa tilmaamayaasha caafimaadka (health indicators) sida aan hoos ku arki doonno iyaga oo faah-faahsan oo tiir waliba ka kooban yahay isirro u gaar ah.
Meeqaamka caafimaadku waa tilmaamaha xaaladda iyo heerka caafimaadka ee bulshadu ku sugan tahay. Waxa loo isticmaalaa sidii loo qiimayn lahaa xaaladda guud ee caafimaadka iyo sidii loo ogaan lahaa inuu jiro xanuun iyo inaan wax xanuun ahi ama bukaani jirin.
Waxaa inta badan lagu soo koobaa filashada nolosha (inta cimriga dadku gaadho) iyo marka bulshadu aamminsan tahay in meeqaamka caafimaadkoodu taam yahay. Waxyaabaha la cabbiro ee la qiimeeyo waxa ka mid ah in guud ahaan in caafimaadka dadweynuhu sidii la rabay u shaqaynaayo oo aanu jirin xanuun jirka ah, maskaxda ah iyo inay jirto ladnaani sidaan ku soo aragnay qeexitaanka caafimaadka. Tilmaamayaasha meeqaamka caafimaadka lagu qiyaaso waxa ka mid ah:
Dhimashada: Da’da iyo jinsiga dhinta (Mortality by age and sex)
Filashada nolosha bulshada ee heerka cimriga dadka (Life expectancy at birth)
Heerka dhimashada dadka da’diisu u dhexayso 15 sano jir ilaa 60 jir
Heerka dhimashada carruurta ka yar 5 sano (Under 5 mortality rate)
Heerka dhimashada dhallaanka (Infant mortality rate)
Heerka dhimashada ilmaha dhasha/sebiga (Neonatal mortality rate)
Heerka ilmaha ku soo dhinta uurka hooyadood (Stillbirth rate)
Sababta dhimashada (Mortality by cause)
Saamiga tirada hooyooyinka u dhinta umul raaca (Maternal mortality ratio)
Heerka inta u dhimata cudurka Qaaxada (TB mortality rate)
Heerka dhimashada AIDSka la xidhiidha (AIDS related mortality rate)
Heerka dhimashada Duumada (Malaria mortality rate)
Heerka dhimashada dadka cimrigoodu u dhexeeyo 30-70 sano ee u dhinta
xanuunada wadnaha, kansarka, sonkorowga/kaadi macaanta, xanuunada raaga ee ku dhaca habdhiska neefsashada iwm.
Heerka dhimashada dadka isdila/ismiidaamiya
Heerka dhimashada shilalka waddooyinka gaadiidka/baabuurta
Heerka dhalmada/taranka dhalinyarada (Adolescent fertility rate)
Heerka wadarta guud ee taranka (Total fertility rate)
Kiisaska (cases) bukaanka ah ee u soo dhacay cudurada tallaalka lagaga hortagi karo
Baahsanaanta dadka ay ku dhacday Qaaxadu (TB prevalence)
Baahsanaanta dadka uu ku dhacay HIV (HIV prevalence)
Heerarka dadka ay ku dhacday Duumadu (Malaria rates)
Baahsanaanta dadka uu ku dhacay Joonisku/Cagaarshowga (Hepatitis prevalence)
Heerarka dadka ay ku dhaceen cudurada galmada laga qaado (Sexual transmitted infections rate)
Heerarka dadka uu ku dhacay kansarka iyo noocyadiisa (Cancer morbidity rates)
Sababaha halista caafimaadka (Health risk factors)
Sababaha halista caafimaadku waa tilmaamayaasha tilmaama waxyaabaha halista ama khatarta caafimaad keena ee sababa xanuunada iyo cudurka. Waa wax kasta iyo sifo kasta oo dabiici ama aan dabiici ahayn oo gaadhsiisa ama kordhisa suurtagalnimada in qofka xanuun ama dhaawac ku dhaco. Tilmaamayaasha tilmaama halista caafimaadka waxa ka mid ah:
Heerka nafaqadarrada (Undernourishment rate)
Dhallaanka la nuujiyo naaska keliya ilaa 5 bilood jirka
Bilowga hore ee naas nuujinta
Heerka dhallaanka ku dhasha miisaan yarida/miisaanka hoose
Heerka caruurta ka yar 5 sano jir ee hagaasta (Aan korin nafaqodarro darteed)
Heerka baahsanaanta dhiig yarida caruurta (Anaemia prevalence in children)
Heerka baahsanaanta dhiig yarida dumarka da’da taranka (Anaemia prevalence in women of reproductive age)
Gaar ahaan kuwa la kala qaado (Infectious diseases)
Sababaha halista deegaanka (Environmental risk factors)
Dadka inta hesha biyo nadiif ah (Population access to drinking clean water)
Dadka inta ku nool degaan saxadhowr leh (Population using safely managed sanitation service)
Dadka inta isticmaasha shidaalka karinta, maayadda iwm (Population using modern fuels for cooking/heating/lighting)
Heerka dikhowga hawada magaalooyinka (Air pollution levels in cities)
Xanuunada aan faafin (Non-communicable diseases)
Tirada guud ee dadka da’doodu ka weyn tahay 18 sano jirka ee isticmaala sigaarka iwm
Caruurta ka yar 5 sano jirka ee miisaankoodu sareeyo ee cayilan/buurbuuran
Dadka qaangaadhka ah ee cuslaaday/cayilan (Overweight/Obesity)
Dadka qaangaadhka ah ee uu kacsan yahay dhiiggu (Raised blood pressure)
Dadka qaangaadhka ah ee sonkorta dhiiggu kacsan tahay (Raised blood sugar level)
Qaadashada ama isticmaalka milixda/cusbada (Salt intake)
Socod la’aanta iyo dhaqdhaqaaq yarida dadka qaanqaadhka ah
Heerka baahsanaanta gacan ka hadalka gaar ahaan qoysaska
Daboolista adeegyada caafimaadka (Health service coverage)
Daboolista adeegga caafimaadku waa tilmaamayaasha tilmaama inta ay le’eg tahay baaxadda adeegga caafimaadku iyo dabooliddiisa bulshada oo ah in daryeelka caafimaadku dhammaan dadweynaha wada gaadho si looga hortago xanuunada iyo cudurada loona daaweeyo xanuunada.
Tilmaamayaasha tilmaama baaxadda adeegga caafimaadka iyo dabooliddiisa bulshada waxa ka mid ah:
Caafimaadka haweenka uurka leh iyo dhallaanka
Daryeelka haweenka dhalmada ka hor (Antenatal care coverage)
Daryeelka haweenka waqtiga dhalmada iyo helista umuliso caafimad
Daryeelka haweenka umulnimada ka dib (Postpartum care coverage)
Isha ku haynta calaamadaha cudurada dhalmada ka dib
Daryeelka caruurta shubanta
Bixinta xanaanno dheeraad ah sida siinta Vitamin A
Heerka tallaal gaadhsiinta
Jadwalka tallaalka qaranka
Heerka tirada guud ee dadka qaba HIVga ee la ogaaday
Ka hortagga HIV inaanu u kala gudbin hooyada iyo ilmaha
Daboolidda daryeelka dadka qaba HIVga
Daboolidda daawooyinka iyo gaadhsiinta dadka qaba HIVga
Xakamaynta fayraska sababa HIVga
Dadka qaba Qaaxada oo la ogaado daawada daawaysa
Heerka ogaanshaha kiisaska Qaaxada
Daaweynta iyo daboolista Qaaxada daawada u adkaysata ee u baahan daaweyn dheeraad ah (Multidrug resistant TB)
Ka daaweynta iyo ka hortagidda Duumada hooyada uurka leh
U isticmaalka daaweynta Duumada shabaqyada (maro kaneecada) lagu daaweeyey sunta kaneecada disha (Use of insecticide treated nets)
Daaweynta dadka ay ku dhacday Duumadu
Ka buufinta hadhaaga kaneecada meelaha dahsoon
Cudurada kulaylayaasha ee aan la dhaadin (Neglected tropical diseases)
Ka hortagista iyo daaweynta cudurada kulaylayaasha ee la dayacay
Baadhitaanka iyo ka hortagga xanuunada (Screening & preventive care)
Baadhitaanka kansarka sida ka ku dhaca ilmo galeenka iwm.
Caafimaadka maanka (Mental health)
Daboolista adeegga dadka qaba xanuunada madaxa/maskaxda
Nidaamyada caafimaadku waa tilmaamayaasha tilmaama nidaamyada caafimaadka iyo waxtarkooda. Mararka qaarkood waxa loo yaqaan nidaamka daryeelka caafimaadka (Health care system) waana halka laga hawl geliyo oo laga abaabulo shaqaalaha, hay’adaha caafimaadka, iyo khayraadka lagu fuliyo adeegyada daryeelka caafimaadka si loo gaadhsiiyo dhammaan dadweynaha adeegga caafimaadka gaar ahaan meelaha ay ka jirto baahida caafimaad iyo dadka bartilmaameedka ah.
Tilmaamayaasha tilmaama nidaamyada caafimaadka iyo waxtarkooda waxa ka mid ah:
Tayada iyo isku aaminidda daryeerka caafimaadka (Quality and safety of care)
Heerka dhimashada waqtiga qalliinka iyo daaweynta (Perioperative mortality rate)
Heerka daryeelka xanuunada umulaha iyo haweenka
Heerka dhimashada haweenka ku umula goobaha caafimaadka
Dib u eegidda dhimashada umulaha/hooyooyinka umul raaca
Heerka guusha laga gaadhay daaweynta Qaaxada (TB treatment success rate)
Adeegyada khaaska ah helitaankooda iyo diyaarsanaantooda
Isticmaalka adeegga caafimaadka (Service utilisation)
Helitaanka adeegga caafimaadka (Health service access)
Xajmiga sariiraha isbitaalka (Hospital bed density)
Helitaanka daawooyinka lagama maarmaanka ah iyo agabka kale ee daryeelka
Shaqaalaha caafimaadka (Health workforce)
Tiradooda iyo ku filnaantooda dalka
Hay’adaha tababarka shaqaalaha iyo inta ay soo saaraan
Macluumaadka/Xogta caafimaadka (Health information)
Diiwaangelinta dhalashooyinka dalka oo dhan
Diiwaangelinta dhimashada dalka oo dhan
Dhammaystirnaanta iyo helitaanka warbixinaha caafimaadka ay soo saaraan goobaha iyo waaxyaha caafimaadka dalku.
Maalgelinta caafimaadka (Health financing)
Wadar sanadeedka kharashka loo qoondeeyey caafimaadka (inta ay ka tahay miisaaniyadda dalka)
Ilaha maalgelin dibadeedda
Ammaanka/Amniga caafimaadka (Health security)
Awooddida iyo ku dhaqanka xeerarka caalamiga ah ee caafimaadka muhiimka u ah.
Xakamaynta cudurada faafa.
Sawirka guud ee waddan laga daalacdo horumarkiisa waa tayada daryeelka caafimaadkiisa. Waayo haddii hannaanka caafimaadka waddanku hagaagsan yahay waxa kordha wax soosaarka iyo dhaqaalaha waxana yaraada saboolnimada. Sidaa darted, waa lagama maarmaan in inta jaangoysa ee dejisa siyaasadda waddanku inay ku xisaabtamaan sidii daryeelka caafimaadka kor loogu qaadi lahaa. Sidoo kale inta isticmaasha adeegga caafimaadka iyana waa muhiim inay caafimaadka waddanka qiimayaan oo kula xisaabtamaan hoggaanka talada dalka haya si ay u helaan daryeel caafimaad oo munaasib ah.
Sidaa awgeed, ku dhaqanka, hirgelinta xogta iyo macluumaadka laga helay tilmaamayaasha caafimaadka (health indicators) waxay sababtaa in daryeelka caafimaadku u shaqeeyo sidii la rabay, caafimaadka bulshaduna fiicnaado isla markaana dhimashada iyo xanuunkuna hoos u dhacaan. Heerka nafaqadarrada ayaa meesha ka baxa waxaana suurtoobaysa in dhammaan bulshadu hesho biyo nadiif ah iyo degaan saxadhowr leh. Waxa kordha filashada nolosha dadka oo cimrigoodu dheeraado isla markaana waxa yaraata baahida guud iyo gaar ahaaneed ee caafimaadka waxana daryeelka caafimaadku gaadhaa dadka bar-tilmaameedka ah sida haweenka, caruurta, waayeelka, dadka laxaadka la’a, saboolka iyo danyarta, reer guuraaga iyo dadka meelaha fog ku nool.
Dr. Yasin Abdi, May 2017